Falanqayn: Madaxweyne Farmaajo wuxuu Gacanta ku hayaa Ukun Gorayo Cadaw Badan leh | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Falanqayn: Madaxweyne Farmaajo wuxuu Gacanta ku hayaa Ukun Gorayo Cadaw Badan leh
Falanqayn: Madaxweyne Farmaajo wuxuu Gacanta ku hayaa Ukun Gorayo Cadaw Badan leh
Markaan wax Falanqeynayo waxaan jecelahay inaan Xaqiiqda Runta ah ee Dadka soomaaliyeed ku sugan yihiin Inaan Tilmaamo sidaan wada og nahay waxaa Madaxweyne maxamed Cabdulaahi Farmaajo, laga sugayaa Marka la caleemasaaro kadib
in uu soo magacaamo Raysal Wasaare mudo 30 cisho Gudahooda ah sida ku Qoran Dastuurka Kumaal gaarka ee Faderaalka arinka soo magacaabidda Raysal wasaaraha waa in uu tix galiyaa heshiis dhaqameedka 4.5 kaas oo Qoraya in Beesha Hawiye laga soo xulo Raysal wasaaraha Dawladiisa cusub.
Sidaan wada ognahay waqtiga hada lagu jiro Nooca Dawlanimo ee aan ku dhaqanaa waa hab Faderaal ah Taas oo lagu soo xulay Xildhibaanada Labada Gole ee baarlamaanka afka qalaad loogu yaqaano (bicameral legislature)
Markaa arinaka iyadoo la tix-galinayo waa in madaxweyne Farmaajo ilaaliyaa sharciga faderaalka.
markaa waa in uu keena Raysal wasaare Ku abtirsada Beelaha Hawiye Marka kalena laga soo xulo Dawlad Gobaleedka Galmud Hirshabeele iyo Alsuna Waljameeca
markaan Falaqeyn-tayda Dib ugu noqdo waxaad wada og tihiin soo dhaweyntii Iyo ku Farxiddii isbadalka cusub ee soomaaliya gashay hada way dhamaatey.
Waxaa la doonayaa in loo dhaqaaqo xasilinta dalka soomaaliya, iyadoo waqti adag lagu jiro oo abaaro iyo colaad ay jiraan . Saan hore u Tilmaamay madaxweyne Farmaajo, waxaa laga sugayaa Raysal wasaare waxaan soo sheegay xeer dhaqamaadka siyaasadeed ee noo yaala iyo Nooca dawladnimo ee aan ku dhaqano in uu markasta tix galiyo.
Saad wada og tihiin xilka qaabkaa loo marayo waxa la raadinayaa waa hal shaqsi oo wanaagsen aqoon leh maamulkana wax ka yaqaan in laga dhigo Raysal wasaaraha xukuumadda dowladda cusub.
xaaladda siyaasadeed ee Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi ‘Farmaajo’ uu doonayo in uu Soomaaliya Dib ugu Mideeyo waa arin wado Khatar ah loo marayo.Cadow badan ogaleeyn in soomaaliya xasisho. Gaar ahaan Dawladaha Dariska aan lanahay
Markaa xaqiiqda jirta ee madaxweyne Farmaajo sugaysaa waa in uu Dastuurka dawladnimo soomaaliya dhawraa marna Siyaasadda xeer dhaqameedka Beelaha Hawiye Tixgeliyaana taasi oo ah in aanu wax Faragelin ah ku sameeyn xeer-hoosaadkooda.
Waa in aanuu beel gaara la safan.
Waxaa kaloo shacabka soomaaliyeed si Guud Madaxweyne Farmaajo uga sugayaan in Raysal wasaaraha uu soo Magacaabi doono uu ka madaxbanaan yahay koox diimeed iyo mid xisbiyeed ama mid uu ku keenay saxiib-tinimo.
Markaa hayday hawsha ugu horaysa ee Madaxweyne farmaajo, inuu qabto ay tahay magacaabista Raysal wasaare, ka dibna hadii uu ku guulaysto in si dhaqso ah uu u magacaabo Raysal wasaare ay heshiis ku yihiin Dhammaan Beesha Hawiye iyo Maamul Gobaleedka Galmud Hirshabeele iyo alsu wal-jameeca.
Waxa Falanqeyn-tayda ku soo Gabababaynayaa Madaxweyne Farmaajo, marka hore ilahay ha ku Toosiyo Talada saxda ah ee Caddaaladda ku dhisan iyo somaalinimada Dalku waa nawada deeqaa ee Hogaanku xilku Nama wada deeqo, arinkaa ayaa looga baahan yahay inay wax garadka soomaalidu Fahan siyaan shacabka soomaaliyeed.
markaa Hadey Dadka soomaaliyeed la yimaadaa dhaqanka wax walba reer hebal ayaa xaq u leh Runtu waxay noqon in siyaasada soomaalidu noqotay Ukun Goroyo oo cadaw kasta cunayo.
Previous articleQaxooti cusub ee Soomaaliyeed oo lagu soo dhoweeyay Maraykanka
Next articleDaawo: Banaanbaxyo lagu taageerayo madaxwaynaha cusub oo mar kale ka dhacay Muqdisho